Maro ny ankizivavy ao amin’ny vanim-potoana Sovietika nofy hanambady any ivelany. Izy ireo mahita ny fiainana ho toy ny angano, ny Printsy eo ambony soavaly fotsy, Villa ny ranomasina, ary tsy misy ahiahy. Aoka isika nandritra ny fotoana fohy hanala ny»raozy miloko solomaso»sy hanombana ny zava-misy amin’ny fanambadiana mahonon-tena mijery. Misy olona tahaka antsika ihany koa. Tsy misy ny tsara na ny ratsy Firenena, misy fotsiny ny olona. Tsy handeha aho mba hilaza ao amin’ity lahatsoratra ity, ny zavatra tsara na ratsy. Miresaka fotsiny momba ny fahasamihafana eo amin’ny fomba fisainan’ny. Dia hanazava indray mandeha aho dia manana fifandraisana manokana amin’ny anarana dia tsy mpitsara ny fifandraisana na namana fotsiny amin’ny alalan’ny fandinihana. Eto ny iray hafa, taona maro lasa izay, vehivavy nanao zipo ny tany, tsy mahaforona sy ny tsy fanarahan-dia. Avy eo ny fifindra-monina Breziliana, Okrainiana, Breziliana any Portiogaly. Ary, mazava ho azy, ny kolontsaina nanomboka afangaro. Ny tanora ankehitriny dia bebe kokoa malala-tsaina, miaraka amin’ny faniriana ny hianatra sy ny faniriana mba hahazoana ny zavatra eo amin’ny fiainana. Andeha isika hiresaka momba ny lehilahy sy ny vehivavy. Tsara fotsiny ny taona ho an’ny fanambadiana. Inona no azonao antenaina avy amin’ny lehilahy sy ny vehivavy fa dia vonona ny hanome ny valin’izany. Ho Portiogaly ara-dalàna amin’ny asabotsy mba hanaovana ny fanadiovana. Mety hanontany tena ianareo hoe inona no tena manokana. Ny olon-drehetra no manao ny fanadiovana.
Ny sabotsy, midika izany fa ny manontolo ny sabotsy, sy ny ora tsy toy ny nahazatra antsika hanao. Izy ireo dia tena afaka hanokana ny iray andro manontolo. Ary, tsy mialoha ny fety sasany, ary isaky ny sabotsy. Ary ny olona dia mahatsapa toy ny zavatra mazava ho azy fa izy ireo handeha ny asabotsy amin’ny namana ao amin’ny trano fisotroana kafe, sy ny vehivavy,»manasa-trano». Ary, mazava ho azy, dia tsy maintsy mianatra ny nahandro zavatra lovia, raha te — mitady asa, ny azo inoana fa ho toy ny borscht na dumplings ny aotra. Any ambanivohitra dia mbola azo atao ny mahita ny vehivavy nandroso ny taona miaraka amin’ny entona siny hoditra eo amin’ny lohany na ny harona ny ovy. Ny olona gaga ny vehivavy tsy mba hisintona roapolo kilao ny sakafo any an-trano. Ara-dalàna ny anarana fifandraisana alohan’ny fanambadiana mety haharitra taona na mihoatra. Misy toe-javatra, ary matetika, rehefa misy olona telo-polo taona mipetraka amin’ny ray aman-dreniny, ary»hita»eo amin’ny faran’ny herinandro ny»sipa»momba ny taonany. Ny marina dia ny vehivavy dia niezaka haingana mba hahazo ny lisitry ny birao. Tsy fantatro loatra ny zavatra, saingy zavatra iray no azo antoka: ny anarana, izay efa nisy ny fifandraisana amin’ny vehivavy te intsony ny fifandraisana amin’ny zavatra ity no zava-misy. Matetika izy ireo no hanambady, satria izany no ilaina, tsara na mandoa amin’ny carte ho an’ny trano fonenana. Ary avy eo dia olon-drehetra fiainantsika fiainany. Eto, ny vehivavy dia tsy misy afa-tsy. Izy ireo dia tsara raha ny olon-drehetra mandoa ho an’ny tenany, na mifandimby mandoa ho an’ny ny antsika. Mazava ho azy, misy ireo maningana. Fa amin ny fitsipika, izany dia ara-dalàna, ho azy ireo. Ary izy ireo dia afaka ny filaminana iray ho roa tapa-mofo dia tsy avy amin’ny fitiavam-bola, ho azy ireo dia ara-dalàna. Tsy misy na inona na inona mihitsy mba hanazavana. Saingy izy ireo dia afaka ny ho tsara tarehy miteny sy manoratra momba ny fitiavana.
Ary jereo fa ombilahy kely maso
Matetika dia afaka mahita ny mpivady izy ny tanora sy tsara tarehy, ary izy no taona no ho miakatra, kilao mavesatra noho ny telo-polo, ary nibanjina azy toy ny andriamani-bavy. Mihazona ny tanako ary tsy namela ahy handeha, matahotra izay hitondra. Tsara iray hafa ny lafiny ao amin’ny fanambadiana amin’ny teny portioge ny fahazoan-dalana honina sy ny anarana maha-olom-pirenena. Raha ny lanjan’ny fonenana ho an’ny olon-tsotra vola lany momba ny euros, amin’ny alalan’ny fanambadiana (ho an’ny vadiny ny anarana, sy ny zavatra vadiny) ihany euros. Ary taorian’ny taona maro ny fanambadiana, ny vahiny vady no mendrika ny anarana maha-olom-pirenena. Na inona na inona, dia manana asa na tsia, izy no mahafantatra ny fiteny portiogey sy ny tantara na tsia (ho an’ny maha-olom-pirenena eo amin’ny fomba mahazatra dia ilaina ny toe-javatra). Mbola misy anarana»ao an-toerana famokarana». Ireo ny olona (sy ny vehivavy) izay efa nandray ny anarana maha-olom-pirenena. Ho an’ny antontan-taratasy izy ireo, dia manana ny zo maha-tompon-tany anarana (ary izany dia mihatra amin ny fanambadiana ihany koa). Raha ny toe-tsaina izy ireo dia hafa kely avy ireo izay nijanona tao an-trano. Fa indray, izany rehetra izany dia miankina amin’ny tsirairay. Olona niaina eto sy nianatra avy ao amin’ny kolontsaina ao an-toerana tsaratsara kokoa, ary ny olona, ny mifamadika amin’izany. Hanambady ny portiogey tao Portiogaly na ao an-Trano. Izaho dia tsy manoratra ny lamin ny fanambadiana ao an-trano, dia soraty ny zavatra tokony ireto avy ny vahiny ampakarina: pasipaoro, ny fonenana, ny tahirin-kevitra fa dia manamafy fa ianao tsy manambady ao an-Trano, ary tsy misy ny olana manakatsakana ny fanambadiana (navoaka tao amin’ny Masoivoho). Raha amin’ny mpizaha tany visa, ohatra, ny toeram-ponenana dia tsy ilaina. Raha tsy nisy fahazoan-dàlana na ny fonenana (firaketana birao) manaiky ny fangatahana (asa fanompoana, miara-miasa amin’ny vahiny mpifindra monina) fa inona toerana misy anao ao amin’ny firenena, ary avy eo dia mila miandry ho an’ny valin. Iray volana na mihoatra, ary avy eo dia mety mahazo manambady. Misy matetika miasa ny olombelona amin’ny lafin-javatra ao Portiogaly dia matetika ny hira na ny malahelo. Mijery olona, mahazo ny olona dia manomboka mba asio niteny ny kodiarana, ary ny olona no manao handefitra sy miezaka manampy. Fanambadiana amin’ny andro fiasana ka miasa mandritra ny ora maro ao an-Tsoratry ny biraon’ny dia ny Euro. Tamin’ny faran’ny herinandro, ny famangiana ny lanonana avy ny Euro. Na iza na iza manana traikefa miaraka amin’ny ankizilahy na ankizivavy anarana manasa anao mba hiresaka momba ity lohahevitra ity ao amin’ny forum
Lehilahy avy any Aostralia Mampiaraka ao Aostralia →